Khulisa i-Search Engine Traffic
Ngabe Isazi Sakho se-SEO Sikhuphule iTraic Organic 84%?
NgeSonto, uDisemba 27, i-2009 NgoMgqibelo, Januwari 14, 2017 Douglas Karr
Kuleli sonto ngikhuthazekile ukwenza ucwaningo lapho ngibona i Isazi se-SEO ukukhushulwa kwiwebhusayithi yenye inkampani. I- I-SEO guru embuzweni kune-blog ebineminyaka eminingi ikhona kunami - ngakho-ke benginelukuluku lokuqhathanisa izibalo zethu. Ngixhumana namakhasimende amaningi ekusebenzeni kahle kwezinjini zokusesha, kepha angikaze ngizibize nge- an uchwepheshe.
Ngiguqula isihloko sami ngokususelwa ekuqhathaniseni nalo mfana… one-SEO neWebhu Yokumaketha ibhulogi ebilokhu yahlala isikhathi eside kunami, ihlangene nenkampani enhle enamalungu amaningi amaklayenti amakhulu okungenzeka asebenzisa imali eningi yena.
The SEO Uchwepheshe ayilinganisi # 1 ngegama elilodwa elingukhiye lokuncintisana.
The Martech Zone amazinga # 1 ngamagama angukhiye wokuncintisana angama-31.
The SEO Uchwepheshe amazinga angamagama awukhiye ayi-19 jikelele.
The Martech Zone amazinga angamagama angama-741.
The Isazi se-SEO blog ibalwa cishe ngama-87,000 nge-Alexa.
The Martech Zone ubeka ama-47,000 nge-Alexa.
Martech Zone iyaqhubeka nokutholakala ku amabhulogi wokukhangisa aphezulu ayi-100 ku-inthanethi. Ibhulogi ye-SEO Expert's Web Marketing ayikho ngisho ohlwini.
Eqinisweni, selokhu ngiqale elami ibhizinisi, my i-organic search engine traffic uku Martech Zone lenyuke ngama-84%:
Amabhulogi ngokwemvelo ayakhanga ezinjinini zokucinga ngoba ahlinzeka ngeplatifomu lapho ungabhala khona okuqukethwe kaningi bese ukuletha ngendlela elenzelwe izinjini zokusesha ukuthi zithole futhi zikhombe. Awekho amasu engiwasebenzisayo ayimfihlo… empeleni ngiwabhalile wonke ku-eBook yami, Ukubhloga i-SEO futhi izokwanda kulokho ngencwadi ezoshicilelwa ehlobo elizayo.
Uma inkampani yakho idinga usizo nge-Search Engine Optimization yakho, ungashayela eyodwa yalezo Ochwepheshe be-SEO… Noma unganikela Highbridge ucingo… inkampani ngubani yenyuse eyayo i-Search Engine Traffic ngo-84% ezinyangeni eziyi-7 ezedlule. Kungukukhetha kwakho!
Isifundo, yiqiniso, 'ukwethemba kepha uqinisekise'. Ngoba nje isazi esizimemezele sine-blog, inkampani noma ngisho nencwadi, asibenzi babe uchwepheshe. Imiphumela ibenza babe uchwepheshe!
Uma ungathanda ikhophi ye-eBook mahhala, mane ubhalise kubhulogi lami nge-RSS noma nge-imeyili futhi uzobona isixhumanisi kunhlokweni wokuphakelayo. Leso sixhumanisi sizokusa ekhasini elizovela isixhumanisi sokulanda.
Tags: umeluleki we-seoIsazi se-seoimiphumela
Dec 28, 2009 ku-6: 57 AM
Kufanelekile! Unokuqukethwe okuhle lapha.
Dec 28, 2009 ku-8: 55 AM
Nami 'ngiyisikole esidala' njengoDouglas futhi kuze kube manje nginqabe ukuzibiza ngochwepheshe… ngize ngiqhathanise ukusebenza kwami ​​nemiphumela yami nalabo okuthiwa bangongoti futhi njengoDouglas wamangala ngemiphumela! I-Cleary kukhona i-PR bese kuba nemiphumela… futhi lokhu kokubili akuhambi ndawonye njalo.
Dec 28, 2009 ngo-2: 54 PM
Ngiyabonga kakhulu Ben! Ababhali abengeziwe bangeze ithani engxoxweni lapha kuThe Marketing Technology Blog!
Dec 28, 2009 ngo-2: 55 PM
Kungaba yisikhathi sokuqala ukushintsha isihloko sakho, Oscar! 😀
Jan 3, 2010 ku-9: 02 AM
Kuyamangaza ukuthi bangaki abantu laphaya abazibiza ngochwepheshe be-SEO bese kuthi lapho uqoqa imininingwane ephathelene namasayithi abo, kufanele ubuze imibuzo ukuthi buphi ubufakazi bakho bokuthi ungumpetha we-SEO?
Jan 8, 2010 ku-8: 04 AM
Kuthiwani ngokukhombisa ithuluzi noma amabili ikhasimende elingasebenzisa i-aka Google Insights noma i-Alexa nezithombe zesikrini ezimbalwa ukuqinisekisa izinombolo zakho ukuze nazo zenze okufanayo lapho zibheka "ukuqasha" uchwepheshe wazo olandelayo we-SEO, unjiniyela we-database, njll.
Bafundise ngokwanele ngokudoba ukwazi ukubamba okuhle njengawe.
Iqiniso le-PR vs Scientific liyinto enhle ukudlulisa kumakhasimende.